Mohamed Salah Ma Farxsana, Fursadda Uu Helo Ma Dhalinayo Oo Waanu Dhibaatoonayaa | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(12-12-2018) Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa xalay iska xaadirisay wareegga 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, waxaana ay 1-0 kaga adkaatay Napoli oo ka ciyaari doonta Europa League.
Kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa isha ku hayn doonta Isku aadka wareegga 16-ka oo Isniinta la samayn doono, sida xaqiiqadu tahayna waxay isku beegmi doonaan mid ka mid ah kooxaha kaalinta koowaad kusoo baxay.
Mohamed Salah oo xalay goolka dhaliyey, wejigiisa farxad badan iyo qosol badan midna lagama arkaynin, laakiin wuxuu sameeyey dabbaal-deg ka badan midkii uu saddexleydii Sabtidii uu dhaliyey mid ka badan oo ugu dambayna uu sujuud kusoo xidhay.
Halyeygii Liverpool ee Luis Garcia oo ka mid ahaa xiddigihii 2005 ku guuleystay Champions League, ayaa waxa uu falanqeeyey qaabkii uu u damaashaaday Mohamed Salah, waxaanu tilmaamay in aan laga dareemaynin farxad.
Garcia oo ka mid ahaa khubaradii BT Sports ee falanqaynayay ciyaarihii xalay, ayaa waxa uu tilmaamay in Salah uu khasaariyey fursado uu helay, dhibaatooday xili ciyaareedkan, wejigiisana aanay farxad ka muuqanin.
“Waxay ila tahay in aanu dareemaynin sidii uu dareemayay sannadkii hore. Wax walba way u sahlanayeen sannadkii hore, sannadkan se wuu dhibaatooday kulamo kooban, ma dhalinayo fursadaha uu helo, wuxuuse isku dayayaa inuu is caddeeyo oo uu maanta wax fiican qabto.” Sidaas ayuu yidhi Luis Garcia.
Si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ee falanqeeyeyaasha ciyaaruhu ay soo bandhigaaan dareenka Salah ee ah in aanu muujinaynaynin farxad badan marka uu goolka dhaliyo si la mid ah sidii xili ciyaareedkii hore.